Ozi - Charity | Ọrụ Onyinye Oyi nke Hebei Xueruisha Otu Obi Ndị Obi Ọtọ
Na Disemba 24, 2019, otu Hebei Xueruisha Group tinyere aka na Hebei Hongan Law Firm iji nyere ndị ogbenye aka wee gaa Shanggeer Village, Quyang County, inye onyinye karịa 80,000 yuan nke oge oyi na jaketị, osikapa na mmanụ.
Na Disemba 20, 2019, emere onyinye nke Hebei Xueruisha Group na Bamugou Village, Chicheng County, Zhangjiakou emere na Bamugou Village Committee. Guo Jian, odeakwụkwọ nke Kọmitii Party nke Mahadum Hebei, Guo Xinyao, odeakwụkwọ nke Kọmitii Party nke Chicheng County, Shan Yaojun, onye isi oche nke Partylọ Ọrụ Party nke Mahadum Hebei, Wang Zhonghua, odeakwụkwọ mbụ nke Workingtù Na-arụ Ọrụ Na-akpata vertyda Ogbenye na Bianmugou Obodo Nta, na ndị isi mpaghara na obodo gara emume inye onyinye. Zhou Chunlei nyere Mr. Liu Jianhong ọrụ zuru oke maka ọrụ onyinye. Onyinye nke ihe oriri dị ka jaket ala na mmanụ osikapa ruru ihe karịrị yuan 70,000.
[Ihe osise a dị n'elu sitere n'aka ndị enyi Maazi Liu Jianhong, Onye isi oche nke otu Xueruisha Group]
【Akụkọ ụlọ ọrụ metụtara】
Onye isi nke Baiyangdian ala ụlọ ọrụ
Na-arụsi ọrụ ike ịgbanwe ma nweta nkwalite iji jee ozi na Xiongan New District-Liu Jianhong
- Onye isi oche nke Baoding Xueruisa Group
- "Onye isi obodo na-eto eto n'ime ime obodo na-aba ọgaranya" "National Textile Worker Model"
Ihe atụ aro: N'ime afọ 20 gara aga, Xueruisha Down Products Co., Ltd. zụrụ ma hazie ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ tọn 50,000 nke feathers wee mepụta ma ree ngwaahịa nde 2.2. Ọ bụrụla otu ụlọ ọrụ na-etinye anụ ụlọ na anụ ọkụkọ na igbu na nhazi, belata akụrụngwa, ngwaahịa ala, mmepụta ngwaahịa na mpụga, na e-commerce. O nwere "ụghalaahịa ama ama na mpaghara Hebei" nke Xueruisha, Edelweiss, na Litshu.
Amụrụ na ezinụlọ onye ọkụ azụ ogbenye dara na Baiyangdian, ọ malitere dị ka onye ọrụ ntutu na-achọ ntutu wee banye n'okporo ụzọ achụmnta ego mgbe ọ dị afọ 19, na-anọgidesi ike. Dị ka onye isi ụlọ ọrụ, ọ na-ekere òkè na ntinye nke ụkpụrụ ala nke China Down Industry Association, ma na-eduga ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ ọrụ mmetọ mmetọ. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ enyela ọha mmadụ ihe karịrị yuan 2 nde ma nyefee ihe karịrị 10,000 ala jaketị.
O kere akara a ma ama bụ "Edelweiss" na 2009. Ngwaahịa ndị ahụ na-ere nke ọma n'ọtụtụ obodo ukwu na ọkara dị ka Beijing, Tianjin, Shanghai na Chongqing, ma nwee ọkwá n'etiti ugwu ndị njem nlegharị anya nke oge oyi na Europe na America. Na 2010, Xueruisha tinyere ego na itinye ụlọ ọrụ nnukwu ọbọgwụ ise na Shandong, na-emepụta kwa ụbọchị ntụ ntụ 190,000, wee jiri nwayọ wepụta usoro ọrụ otu nkwụsị nke ọrụ ugbo, ụlọ ọrụ na azụmaahịa.
Mgbe e guzobere Xiongan New Area, ọ tinyere onwe ya na mgbanwe ya na nkwalite ya, na-ezube ịbawanye ụlọ ngosi ihe ngosi na mpaghara ọhụrụ ahụ, ma rụọ ezigbo ọrụ nke njem nleta ụlọ ọrụ; ewusi nnyocha sayensị na mmepe, na-adabere na uru nke nnukwu data iji wuo ọdịnihu ma hụ ebe ị na-ere ahịa n'ịntanetị maka ngwaahịa.